Iran ayaa sheegtay in saynisyahanka nukliyeerka lagu dilay qoray meelfog laga hago – AfmoNews
Iran ayaa sheegtay in saynisyahanka nukliyeerka lagu dilay qoray meelfog laga hago
Qoriga dayax gacmeed lagu hago oo wata “sirdoon macmal ah” ayaa loo adeegsaday dilkii usbuucii la soo dhaafay ee saynisyahan sare ee nukliyeerka Iran, sida uu axaddii u sheegay taliye ku xigeenka ilaalada kacaanka.
Mohsen Fakhrizadeh wuxuu ku socday waddo weyn oo ka baxsan caasimada Iran ee Tehran isaga iyo ilaalo ka kooban 11 waardiye bishii Nofeembar 27, markii qoriga mashiinka “wajigiisa uu ku soo dhowaaday” oo uu toogtay 13 wareeg, ayuu yiri Rear Admiral Ali Fadavi.
Qoriga mashiinka waxaa lagu rakibay Nissan pickup wuxuuna “diirada saaray kaliya wajiga shahiid Fakhrizadeh qaab xaaskiisa, inkasta oo ay ujirto kaliya 25 sentimitir (10 inji), lama toogtay,” wakaalada wararka Mehrs ayaa soo xigatay isaga oo leh.
Waxaa “laga xakameeyay khadka tooska ah” iyada oo loo marayo dayax gacmeed waxaana loo adeegsaday “kamarad casri ah iyo sirdoon farsamo” si loo bartilmaameedsado, ayuu raaciyay.
Fadavi wuxuu sheegay in madaxa amniga ee Fakhrizadeh uu riday afar xabadood “markii uu isku tuuray” cilmibaaraha iyo in “aysan argagixisadu goobta joogin”.
Masuuliyiinta Iran waxay ku eedeeyeen cadowga soo jireenka ah ee Israel iyo kooxda mucaaradka dibad joogga ah ee People’s Mujahedeen of Iran (MEK) dilka.
Telefishanka ay maamusho dowladda ee Press-TV ayaa horay u sheegay in hub “lagu sameeyay Israa’iil” laga helay goobta.
Sheekooyin kala duwan oo ku saabsan geerida saynisyahankan ayaa soo ifbaxay tan iyo markii uu weerarka dhacay, halkaasoo markii hore Wasaaradda Difaaca ay sheegtay inuu ku dhammaaday is rasaaseyn dhex martay ilaaladiisa, halka wakaaladda wararka ee Fars ay ku andacootay in “qori darandooriga u dhaca ah oo laga hago meelaha fog laga hago” uu dilay isaga oo aan sheegin cidna. ilo.
Sida laga soo xigtay Wasiirka Difaaca ee Iran Amir Hatami, Fakhrizadeh wuxuu ka mid ahaa ku xigeenadiisa wuxuuna hogaaminayay wasaarada gaashaandhiga, cilmi baarista iyo hal-abuurnimada iyadoo xooga la saaray “difaaca nukliyeerka”.